युवाहरूको 'स्टार्टअप' सानो स्वरूपले प्रविधिमार्फत जोड्दैछ सेवाप्रदायक र सेवाग्राही
Tuesday,5Sep, 2017 2:41 PM
काठमाण्डौ, २० भदौ - अफिसमा काम गर्दा गर्दै कम्प्युटर बिग्रियो ? या त धाराको पाइप फुटेर पानी चुहिने भएको छ ? काम गर्दा गर्दै विद्युतमा समस्या आएर काम रोकियो ? तपाईँसंग समय छैन अब के गर्ने ?
अनिल श्रेष्ठ, सुनिल श्रेष्ठ र सिता खड्काले सुरु गरेको स्टार्टअप 'सानो स्वरूप' ले यसको समाधान गर्ने जमर्को गरेको छ । यी र यस्ता समस्याहरूमा तपाईँलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले सानो स्वरूप को स्थापना भएको हो । सानो स्वरूपले समस्या र समाधान बीचको पुलको काम गर्छ । सेवा प्रदान गरे बापत उनीहरूले सेवा ग्राही र सेवा प्रदायक फ्रि-लेन्सरसंग निश्चित रकम लिने गरेका छन् । खाता खोल्न यसमा शुल्क लाग्दैन ।
आफ्नो घर निर्माण गर्ने क्रममा भोगेका समस्यालाई आधार बनाएर सानो स्वरूपको सुरुवात भएको यसका संस्थापकमध्येका एक अनिल बताउँछन् । काम गर्ने क्रममा पेन्टर, इलेक्ट्रिसियन, कन्ट्रयाक्टरहरुको लागी हामीले बिभिन्न व्यक्तिबाट आ-आफ्नै प्रकारको सिफारिस पाउँछौ | कोही राम्रा भेट्छौ, कोही मध्यम पाउँछौ र कुनै त्यो भन्दापनि निम्न स्तरका भेटेका छौँ ' अनिल थप्छन् । यसमा सबैभन्दा मुख्य भनेको दर रेट र गुणस्तर हो ।
सानो स्वरूप एउटा प्ल्याटफर्म हो जसमा कुनै पनि प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कार्यको लागी आफ्नो कोटेसन आह्वान गर्न सक्नेछन् । चाहे त्यो प्लम्बिङ होस् वा वेबपेज निर्माण, सानो प्रयास मार्फत कुनै पनि प्रकारको कामको लागि दर्ता भएको स्वतन्त्र व्यक्ति वा व्यापार छान्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ | उनीहरूले बजारमा रहेको प्रतिस्पर्धी दर र सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्थाको अघिल्लो कामको पर्फर्मेन्सको समीक्षाको आधारमा उनीहरूको सेवा सुविधाको छनोट गर्ने मौका उपलब्ध छ | यसरी ग्राहकहरूले स्थानीय व्यवसायीबाट न्यूनतम् दरमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा उनीहरूको छ ।
सानो स्वरूप स्वतन्त्र काम गर्नेहरू र आफ्नो समयमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि नोकरी खोज्ने एउटा कार्यस्थान हो |
सानो स्वरूपले कसरी काम गर्छ ?
आफ्नो क्षेत्रमा पलम्बरको खोजी गर्ने ग्राहकले यसको वेबसाइट सानो स्वरूप डटकममा आफ्नो विवरण भरेर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ र आफ्ना आवश्यकता पोस्ट गर्नु पर्नेछ । यसरि पोस्ट भएका आवश्यकताका अनुरोध सानो स्वरूपले आफ्नो पहुँचमा रहेका र यस्तै स्वतन्त्र काम गर्न चाहने समूहबाट दरखास्त दिएका सेवा प्रदायकलाई लिस्ट गरिदिन्छ र सेवाग्राहीले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सेवा प्राप्त गर्छन् । यसरी सेवा प्रदायकलाई नोटिफिकेसनमार्फत जानकारी गराइन्छ जसमा काम र लाग्ने समय उल्लेख हुन्छ ।
यता सेवाग्राहीलाई पनि काम गर्न इच्छुक मान्छेहरूको विवरण सहित सूचित गरिन्छ र उनीहरूले आफ्नो स्थानमा पायक पर्ने सेवा प्रदायक रोज्न सक्ने छन् ।
काम सम्पन्न भएपछि सेवा शुल्क नगद वा अन्य भुक्तानी पद्धतिबाट भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
५ जना कर्मचारी र ४० भन्दा बढी सन्तुष्ट सेवाग्राहीमार्फत सानो स्वरूप परिचित भइसकेको कम्पनीको दावी छ । अहिले सानो स्वरूप काठमाण्डौं उपत्यकामा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा छ ।